HomeWararka CiyaarahaKarim Benzema oo dhaliyay goolkii 300-aad ee Real Madrid
January 9, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain 0
Karim Benzema ayaa taariikh kale oo shaqsi ah ku gaadhay goolkiisii ​​300-aad iyo 301-aad ee Real Madrid kulankii ay sabtidii 4/1 ku xasuuqeen Valencia kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka France ayaa daqiiqadii 43aad ee ciyaarta fursad u helay inuu shabaqa ku taabto ka dib markii Casemiro lagu dhex tuuray diilinta ganaaxa, waxaana uu u soo istaagay rigooradii ka dhalatay.
Ka dib markii uu Vinicius Junior laba gool u dhaliyay Real Madrid isla markaana uu Goncalo Guedes uu qalbi qaboojin ugu sii daray Valencia, Benzema ayaa soo jeestay, wuxuuna dhaliyay goolkiisii ​​labaad ee xalay daqiiqadii 88-aad.
34-sano jirkaan ayaa sidaas sameeyay, wuxuuna noqday ciyaaryahankii afaraad ee 300 gool u dhaliyay Los Blancos, isagoo ka dambeeya Alfredo Di Stefano (308), Raul (323) iyo Cristiano Ronaldo (450).
Labada gool ee uu Benzema dhaliyay ayaa ka dhigan goolkiisii ​​16-aad iyo 17-aad ee 20 kulan oo uu La Liga ka soo muuqday xilli ciyaareedkan – isaga oo shan gool ka sarreeya saaxiibkiis iyo xiddiga ugu dhow ee Vinicius.
Laacibkii hore ee Lyon ayaa sidoo kale diiwaan gashaday todobo caawin xilli ciyaareedkan horyaalka xilli kooxda Carlo Ancelotti ay sideed dhibcood oo nadiif ah ku hayaan qiimeynta, inkastoo Sevilla oo kaalinta labaad ku jirta ay labo kulan gacanta ku heyso.